Isbeddelka Yaabka Leh Ee Uu Samayn Doono, Xiddiga Uu Dibedda Dhigayo Iyo Ishaaro Laga Helay Unai Emery Oo Faa’iido U Noqon Karta Mourinho – Cadalool.com
Isbeddelka Yaabka Leh Ee Uu Samayn Doono, Xiddiga Uu Dibedda Dhigayo Iyo Ishaaro Laga Helay Unai Emery Oo Faa’iido U Noqon Karta Mourinho
Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa bixiyey ishaaro muujinaysa inuu kaydka gelin doono xiddigii ugu muhiimsanaa kulamadii ugu dambeeyey ee kooxdiisu guulaha gaadhayeen.
Arsenal ayaan dhinaceeda dhulka la dhigin 19 kulan oo xidhiidh ah, waxayse caawa marti u noqonaysaa Manchester United oo garoonka Old Trafford kusoo dhoweyn doonto, halkaas oo Emery uu kaga hor tegi doono Mourinho oo ay xurguf hore u dhexaysay.
Tababaraha Arsenal, Unai Emery ayaa la sheegay inuu isbeddel ku samayn doono shaxdiisa uu ku ciyaaray labadii kulan ee ugu dambeeyey, waxaana uu dibedda dhigi doonaa laacibka afka hore uga ciyaara ee Pierre-Emerick Aubameyang oo uu beddel kusoo gelin doono qaybta dambe.
Sida uu qoray wargeyska Metro, Emery waxa uu booska koowaad kusoo bilaabi doonaa weeraryahanka reer France ee Lacazette oo kasoo laabtay dhaawac uu ku seegay kulamo uu shaqadiisa qabtay Aubameyang.
Warku waxa uu sheegay in weeraryahanka reer Gabon oo ahaa halyeyga Arsenal, kulankii Tottenham, in aanu kasoo muuqan doonin safka hore, taas oo fursad u noqon karta Jose Mourinho oo dhibaato ka haysato difaaca, una baahan in weeraryahannada Arsenal ee orodka badan ay ka maqnaadaan.
Go’aankan oo haddii uu Emery qaato aanay ku farxi doonin jamaahiirtu ayaa waxa uu wargeyska Metro xusay in tababaruhu sheegay in Aubameyang uu yahay ciyaartoy ku wanaagsan dhinacyada weerarka, laakiin xilliyadan dambe kusoo baxay weerarka tooska ah balse uu u baahan yahay in weeraryahan labaad uu caawiyo.
Si kastaba ha ahaatee, haddii uu Emery sameeyo sida uu wargeysku sheegay, waxay noqon doontaa inuu isbeddel ku sameeyey shaxdiisii guulaha gaadhsiisay kulamadiisii u dambeeyey.